मनोज पाण्डेको असली धन्दा छताछुल्ल, प्रधानमन्त्रीले लिए एक्सन ! — Motivatenews.Com
मनोज पाण्डेको असली धन्दा छताछुल्ल, प्रधानमन्त्रीले लिए एक्सन !
काठमाडौं – जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा संचालक मनोज पाण्डेको असली धन्दा छताछुल्ल भएको छ । जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमका नाममा सिंहदरवारभित्रै ‘चन्दा आतंक’ मच्चाउँदै आएका मनोज पाण्डेलाई फेरि अर्को धक्का लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग सल्लाह गरी नयाँ अनलाइन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताउँने पाण्डे रिमालका भान्जा हुन् । भान्जा भएकै कारण उनले कार्यक्रम बन्द भएपनि प्रधानमन्त्रीका नाममा चन्दा आतंक मचाइरहेको पाइएको छ ।
टेलिभिजनको नाममा सिंहदरवारभित्रको चन्दा आतंक मञ्चाउँदै आएका उनी कार्यक्रम बन्द भएपछि सिंहदरवार बाहिरका ब्यापारीहरुलाई दुःख दिन लागेको बताइएको छ । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री र सरकारको बचाउमा डिजिटल प्रविधिको अनलाइन सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको र सहयोग गर्न ब्यापारी काहाँ धाउन थालेका छन् ।
दरवारमार्गमा कार्यलय खोलेर उनले करोडौं लगानीमा नयाँ अनलाइन सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको छन् । आर्थिक र प्रशासनिक कामको सम्पूर्ण जिम्मा आफूले लिने र सम्पादनका लागि तत्काललाई रामेश्वर बोेहोरालाई अगाडी सारेर संचालन गर्ने योजना पाण्डेको रहेको छ ।
पाण्डेको ब्यवस्थापन र बोेहोराको सम्पादनमा आउन लागेको अनलाइनलाई अहिले प्रधानमन्त्री र वालुवाटारको नाम वेचेरै विवादास्पद ब्यापारी दिपक मल्होत्रावाट आर्थिक सहयोग लिने काम भईसकेको छ । मल्होत्राले प्रधानमन्त्रीकै प्रमुख सल्लाहकार सम्मको आग्रहका आधारमै अनलाइनलाई लगानी गरिदिने वचन दिईसकेको स्रोत वताउँछ । केही वैकमा समेत यसैगरी प्रधानमन्त्रीको नाम वेचेरै वार्षिक रुपमा विज्ञापन सम्झौता गर्ने काम समेत भईसकेको छ ।
टेलिभिजनमार्फत सिंहदरवारभित्र चन्दा आतंक मञ्चाएका पाण्डेले अहिले ब्यापारीहरुमार्फत नयाँ आतंक सिर्जना गर्न थालेपछि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली रुष्ट छन् । यसरी चन्दा आतंक मच्चाएको सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुगेपछि उनी रुष्ट बनेका हुन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस संगठन नेपालका सहसंयोजक गणेश बस्नेतलाई बालुवाटार बोलाएर चन्दा आतंक गर्नेहरुलाई सम्झाउन लगाएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीको नाममा ठग्ने प्रवृत्तिको प्रधानमन्त्री जानकार रहीसकेको र त्यसरी आएमा प्रहरीमा खबर गरी वुझाईदिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् ।
बस्नेतले मंगलवार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आएपछि स्टाटस लेख्दै सबैलाई सुचित गरेका छन् ।